Lenovo Z6 Pro wuxuu imaan doonaa Abriil 23 iyada oo loo marayo astaanta ciyaaraha Legion | Androidsis
Lenovo waxay xaqiijisay maanta inay calanka Z6 Pro waxaa laga bilaabi doonaa Abriil 23 magaalada Beijing, Shiinaha. Xaqiijinta ka dib, shirkaddu waxay sii deysay aalad cusub oo aaladda ah taasoo sii xaqiijinaysa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan aaladda.
Xisaabta rasmiga ah ee Lenovo Mobile akoonkeeda Weibo ayaa sii daayay nooc ka mid ah wajiga hore ee taleefanka saacado ka hor. Sawirkani wuxuu xaqiijinayaa taas taleefan la furayo iyadoo lala kaashanayo astaanta Legion-ka Lenovo. Tani waxay noo sheegaysaa in qalabku la imaan doono astaamo kala duwan si kor loogu qaado khibradda ciyaaraha.
Kuwa aan aqoon, Legion waa astaan ​​diiradda ciyaarta ka socota Lenovo, kaas oo daaha laga rogay dhowr sano ka hor. Waxay u egtahay khadka Predator ee Acer iyo taxanaha ROG ee ASUS. Marka la eego xiriirka ay la leedahay shirkadda calaamadda cayaaraha, waxaa iska cad in Lenovo Z6 Pro uu la imaan doono astaamo ku saabsan ciyaaraha, sida aan si sax ah u sheegnay.
Marka lagu daro ururkan calaamadeysan, waxaan sidoo kale wax ka ogaan karnaa xagga hore ee taleefanka. Ka dib markii lagu ciyaaro dhalaalka sawirka, waxaa la muujiyay in Lenovo Z6 Pro wuxuu la imaan doonaa shuruudo aad u hooseeya oo hoose. Meelaha kale, jibbaaradu asal ahaan ma jiraan. Xitaa xaga sare, sameecadaha dhagaha ayaa kufilan gudaha muuqaal aad u caato ah, hubinta in saamiga shaashadda-jirka uu aad u sarreeyo.
Lenovo Z6 Pro oo hoos timaada ururka sumadda ciyaaraha Legion
Dabcan, Macluumaadkan waxaa laga soo qaatay bixinta mana ahan qalabka dhabta ah. Iyadoo la tixgelinayo in teasersiyada rasmiga ah ay jecel yihiin inay ku qariyaan beellada dhabta ah taleefannadooda casriga ah, waa inaan sugnaa oo aan aragnaa haddii Z6 Pro dhabta ah uu leeyahay saamiga shaashadda-jirka oo aad u sarreeya.
Marka lagu daro dhaldhalaaladeeda qafiifka ah, waxaa la xaqiijiyay taas mobilada ayaa leh nooc xad dhaaf ah del Qualcomm Snapdragon 855. Intaa waxaa dheer, waxaa lagu qalabeyn doonaa Kaamirada HyperVision leh muuqaal fiidiyow oo gaar ah oo loo yaqaan 'HyperVideo'. Marka taa laga reebo, waxaa sidoo kale jira warar xan ah oo sheegaya in Z6 Pro uu ka qaadi karo shaybaarrada 100 kamaradood oo MP ah. Hase yeeshe, ma hayno faahfaahin dheeraad ah oo arrintan ku saabsan. Goor dhow waxaan soo bandhigi doonaa macluumaad dheeri ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Lenovo Z6 Pro wuxuu imaan doonaa Abriil 23 iyada oo lala kaashanayo astaanta ciyaaraha Legion